Vao tonga aho! Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
TONGASOA eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Orléans (FLM Orléans)
Mba ahafahanao miaina tsara ny fotoam-pivavahana sy mandray tsara ny Teny miaraka aminay dia namaly ireto fanontaniana vitsivitsy ireto, izay mety ho apetraky ny olona tonga voalohany eto izahay.
Raha toa ka manana fanontaniana fanampiny ianao na fanamarihana, dia afaka manatona ireo diakona eto an-toerana, na koa ny Katekista RAJOHARISON Maurice.
Amin’ny firy no tokony ahatongavako ao am-piangonana?
Ny tsara indrindra dia 15 minitra mialoha ny fanombohan’ny fotoam-pivavahana. Io fotoana io dia ahafahanao mandray toerana am-pilaminana.
Mialoha ny fotoam-pivavahana dia misy ny fotoana malalaka izay iomanana ara-panahy fa hiatrika ny Tompo. Amin’izany no ifandimbiasan’ny Kristiana, mandroso eny anoloana, hivavaka, hizara
tenin’Andriamanitra, na toriteny fohy (5min), na koa anolorany hira. Ireo rehetra ireo dia natao mba hifantohana ara-panahy. Mety hisy koa fianaran-kira atao amin’io fotoana io, araka izay ilàna azy.
Raha toa ka tonga aorian’ny fanombohan’ny fotoana ianao dia misy diakona afaka mandray sy manondro toerana ipetrahanao.
Akanjo manao ahoana no tokony hanaovako amin’izany?
Izay tandrify sy manome voninahitra an’i Jesosy no akanjo anaovana fa tsy misy hoe manokana manao ahoana. Zava-dehibe mantsy ny fahamasinan’Andriamanitra, ka mahatonga antsika hitandrina. Ialàna koa izay mety ahatonga fahatafintohinana eo amin’ny mpianakavin’ny finoana satria tsy ho zary hitovy avokoa ny fatran’ny finoana hananan’ny tsirairay. Misy efa mijoro ka efa mihinana sakafom-panahy, misy kosa mbola misotro ny rononom-panahy.
Tokony hitondra ny zanako sy ny zazakely ao am-piangonana ve aho?
Eny tompoko. Tongasoa ny zaza madinika sy ny ankizy rehetra ao am-piangonana. Manana anjara amin’ny Fanjakan’Andriamanitra izy ireo, ary misokatra ho azy ny Fiangonana.
Misy toriteny isan’alahady ataon’ny Pastora/Katekista sy mpitoriteny tandrify ho azy ireo amin’izany ao anaty fotoam-pivavahana.
Aiza no toeram-piantsonan’ny fiara?
Misy toerana malalaka manodidina ny fiangonana, azontsika ametrahana ny fiara. Na eo amoron’ny varavarana izany na ery ampitan’ny fiangonana.
Ahoana no ahitàna ny toeram-pivoriana?
Ny adiresy misy ny Fiangonantsika dia ny 17 Ter, rue du Maréchal Leclerc – 45000 Orléans.
Ery ampitan’ny fiangonana (misy fivarotam-panafody) ny Place de la nouvelle Orléans, izay sady misy toerana fiantsonana no ahitàna zaridaina filalaovan’ny ankizy. Eo amin’ny ankavanan’ny fiangonana ny Rue du 16 août 1944 ary eo amin’ny ankaviany misy soratra (panneau) manondro hoe Chapelle des Blossières.
Afaka mandray ny Fanasan’ny Tompo ve aho?
Indray mandeha isam-bolana no Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, dia ny Alahady voalohan’ny volana izany. Ny Pastora no manao ny teny fanasana anao hiray latabatra amin’ny Tompo amin’ny fotoanan’ny fandraisam-pitenenana ataony.
Manao ahoana no fizotry ny fotoana?
1:45 tolakandro: Fotoana malalaka fiomanana ara-panahy
2:00 ora: Fotoam-pivavahana
3:30: Fiaraha-miala hetaheta ho an’ny mpianakavin’ny finoana (eto no fotoana fifandraisana eo amin’ny samy kristiana rehefa alahady, ankoatra izay atao any amin’ny Faribohitra). Malalaka ny fandraisan’anjara ho an’izay te-hitondra zavatra hozaraina hiaraha-mihinana sy misotro ao an-toerana.
3:45: Sekoly Alahady
3:45: Fianaran-kiran’ny Kristiana Tanora (KTLM)
5:00: Fivorian’ny Komitin’ny Fiangonana (isaky ny alahady voalohany)